Sarkaal katirsan Shabaab oo Hogaamiyihiisa dilay si uu Dowladd... | Universal Somali TV
Sarkaal katirsan Shabaab oo Hogaamiyihiisa dilay si uu Dowladda Somaliya isugu soo dhiibo.
C/rxamaan Xuseen Wardheere oo Shabaab ay u yaqaaneen Bilaal, kana mid ahaa saraakiisha Ururka Al Shabaab ayaa isu soo dhiibay dowladda federalka Somaliya, sida ay baahisay Wakaaladda SONNA.
Dowladdu ma aanay sheegin halka uu iska soo dhiibay sarkaalkan iyo Shabaab waxa uu u qaabilsanaa, balse wuxuu Mintidiinta Al Shabaab ka mid ahaa ninkan muddo 12 sano ah.
Wuxuu sheegay in uu ka qeyb qaatay dagaalo badan, islamarkaana uu go’aansaday inuu isaga baxo Shabaab, isaga oo sidoo kale tilmaamay dhalinyarada Shabaab ka tirsan in aysan qanaaco ku qabin.
Dowladda Federalka ayuu uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweysay, taas bedelkeeda wuxuu dhalinyarada ka tirsan Shabaab ugu baaqay inay ku soo biiraan dowladda, islamarkaana ka faa’ideystaan baaqii Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo barnaamijkii dadkaaga ka mid noqo ee Wasaaradda amniga.
Falalkii guracnaa ee Shabaab u geysteen shacabka Somaliyed muddadii uu ka mid ahaa C/rxamaan Xuseen Wardheere, ayuu xusay in uu ka qoomameynaayo, uuna ka xun yahay dhibaatadaasi, isaggoona cafis weydiistay shacabka Soomaliyed.
Wareysi uu siinayay warbaahinta dowladda ayuu sidoo kale ku sheegay in uusan farqi weyn u dhaxeyn Ururka Al Shabaab iyo kooxda yar ee Daacish, hase yeeshee waxa ay isku heystaan ay tahay xukun iyo maamul.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa dhowr jeer sheegay in dowladdu ay cafis u fidinayso dhalinyarada ay ka tirsan Ururka Al Shabaab, haddii ay isku soo dhiibaan Dowladda.
Kan-xigaMaareeye Kuxigeenkii Shirkada Isgaars...
Kan-horeSAWIRRO: Mursal oo ka qeyb galay mun...
40,460,632 unique visits